‘Nahazo fivoriana roa ‘two sessions’ izahay: Lahatsary rap amin’ny teny Anglisy midera ny fivorian’ny antoko komonista · Global Voices teny Malagasy
‘Nahazo fivoriana roa ‘two sessions’ izahay: Lahatsary rap amin'ny teny Anglisy midera ny fivorian'ny antoko komonista
Voadika ny 11 Marsa 2019 4:35 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary “Two Sessions”.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Holmes Chan tany am-boalohany ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 4 Martsa, 2019. Navoaka indray tato amin'ny Global Voices ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanaraham-piaramiasa.
Namoaka horonantsary rap amin'ny teny Anglisy ny sampam–baovaom-panjakana Shinoa, Xinhua tamin'ny 4 marsa, horonantsary mampiroborobo ny “two sessions” isan-taona ao amin'ny firenena – ny Kongresim-Pirenena Entim-bahoaka (National People's Congress -NPC) sy ny Komity Nasionaly momba ny Fihaonambe Fakan-kevitra Ara-Politikan'ny Vahoaka Shinoa (National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference- CPPCC).
Nanomboka ny 5 martsa ny “two sessions” (in-droa miantoana) tamin'ity taona ity. Navoaka iray andro monja taloha ny valan-dresaka ara-politika, nampiseho ny “fivoriana indroa miantoana” ho fahafahana maneho ny tanjak'i Shina ny lahatsary mozika, izay nosoratana sy hirain'ilay mpiangaly rap Su Han.
“Jereo manana fivoriana in-droa miantoana izahay, avelao aho hampiseho ny fomban'ny Shinoa. Tohizo ny fivoriana roa, izahay no manana fisiana matanjaka [sic], “hoy ny tononkira.
Manasongadina pikantsary misy ireo zava-bitan'i Shina vao haingana ny lahatsary, anisan'izany ny fahatongavana tamin'ny volana, ny ezaka fanalefahana ny fahantrana ary ny solosaina mahavariana (“supercomputer”) Sunway TaihuLight.
Tononkira mikitroka sy fitsipi-pitenenana tsy mety matetika, tsy hay takarina ny ampahan'ny fehezan-teny.
“Tahaka ny paradisa amin'ny lohataona, tahaka ny lolo amin'ny alina. Jereo ny hazo mikorisa amina kilaometatra maro, rehefa mihaona amin'i Popeye afa-po isika,” hoy ny tononkira.
“Aza ho mpanafika-ny-tany hanery azy hihaza amin'ny tany fahagola. Manaova ho Ready Player One eo anoloan'ny mpandoto maloto,” hoy ny vakiny hafa. “Esory toy ny fanakopakopahana vato ao amin'ny voa (ambany kibo) ny hatendan-kanina rehetra.
Ny “nephrolithiasis”, fantatra koa hoe vato ao amin'ny voa, dia aretina mahakasika ny lalan'ny tatavia.
“Tsara kokoa tsy araka ny nampoizina”
Tao amin'ny Twitter, nankasitrahana ny horonantsary rap “fivoriana in-droa miantoana”, ary koa somary tsy nampoizina. Eto ambany ny iray amin'ireo adihevitra tao amin'ny Twitter momba ilay fampielezan-kevitra ara-politika:
Mbola tsy azoko ny fampiasana an'i popeye sy Ready Player One ao amin'ny “fivoriana indroa miantoana”. Spielberg mihinana anana ao amin'ny Great Hall of the People?
“Fatory ny fehikibonao ary jereo ny zava-bita farany tao Shina, fahefana malefaka tsy mitapoka”, hoy i Adrian Zenz, manam-pahaizana iray manadihady ny toby fanarenana amin'ny faritanin'i Xinjiang ao Shina nanoratra.
Saingy ny sasany kosa mahita ny kalitao tsara kokoa tsy araka ny nampoizina.
Kalitao tsara kokoa tsy araka ny nandrasako tamin'ny hira rap Fivoriana in-dRoa Miantoana nataon'i Xinhua ity
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nampiasa karazana mozika malaza toy ny Rap ny Antoko Komonista Shinoa mba hampitàna ny hafany ho an'ny tandrefana.
Ho fanamarihana ny faha-20 taonan'ny famindrana ny fiandrianan'i Hong Kong, namokatra làlana midera ny politikan'ny fahaleovantena “Firenena Iray, Rafitra roa” i Xinhua. Ary amin'ny taona 2016, hivoaka ny lahatsary mozika manandratra ny “Four comprehensives” an'i Xi mifangaro Beethoven miaraka amin'ny hip-hop. Azo antenaina fa tsy farany amin'ireo andiana famokarana ankehitriny ny “Two Sessions”.